အဘယ်ကြောင့်ရုပ်ရှင်စက်မှုလုပ်ငန်းပျက်ကွက် | Martech Zone
တနင်္ဂနွေ, ဒီဇင်ဘာလ 18, 2005 အင်္ဂါနေ့, အောက်တိုဘာလ 21, 2014 Douglas Karr
မနေ့ကငါနဲ့ငါ့ကလေးတွေက King Kong ကိုသွားတွေ့တယ်။ အထူးသက်ရောက်မှုများနှင့်ကွန်ပျူတာဖြင့်ထုတ်လုပ်သောဂရပ်ဖစ်များသည်အလွန်စိတ်ကူးယဉ်ဆန်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်ထင်သည်ကား (အထူးအကျိုးသက်ရောက်မှုများပေါ်တွင်မူတည်သည်) ရုပ်ရှင်တစ်ခု၏စစ်မှန်သောစစ်ဆေးမှုသည်သင်ကိုယ်တိုင်ကွန်ပျူတာဖန်တီးထားသောဇာတ်ကောင်နှင့်စာနာနားလည်မှုရှိ / မရှိကိုဖြစ်သည်။ ဟောင်ကောင်, characterကန်အမှန်, သူ့ကိုယ်ပိုင်ဇာတ်ကောင်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါအဆုံးအနည်းငယ် hokey ထင်နှင့်နောက်ဆုံးဗားရှင်းအတွက်နှလုံးခုန်ညှိုးနွမ်း၏ပြင်းထန်မှုနှင့်ပြင်းထန်မှုကိုက်ညီမ ... ဒါပေမယ့်စီးနင်းနေဆဲစိတ်ကူးခဲ့ပါတယ်။
ငါကလေးတွေရဲ့သူငယ်ချင်း ၂ ယောက်ကိုယူပြီး ၃ နာရီခွဲလောက်ငါ့ကိုအကုန်အကျခံခဲ့တယ်။ ရုပ်ရှင်မစခင်မိနစ် ၂၀ အလိုတွင်ပြဇာတ်ရုံသို့ကားမောင်းလာသည်၊ ကျွန်ုပ်၏ကလေးများသည်နောက်ကျ။ ညည်းတွားမြည်တမ်းလာကြပြီးကျွန်ုပ်တို့ထဲ၌ထိုင်မည့်ထိုင်ခုံများပါ ၀ င်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်“ Best-Buy-sponsored-turn-” မှတဆင့်ပထမဆုံးထိုင်ရမည် သင့်ရဲ့ဆဲလ်ဖုန်း - ချွတ်ခြင်း - လူထုံဇာတ်ကား”၊ X-Men ၄၅၊ အချိုရည်နှင့်နက္ကို (အာမဂေဒုန်မှတစ်ဆင့်ပြုလုပ်မည့်ဒိန်ခဲဖြင့်) အတွက်ကြိုတင်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံနေသည့်အခြားရုပ်ရှင် ၁၄ ခုအတွက်အကြိုမြင်ကွင်း။
နောက်အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကကျွန်တော့်ကလေးတွေဟာကျွန်တော့်ကိုပရောဖက်လို့ထင်စေခဲ့တယ်။ X-Men ၄၅ မဟုတ်၊ X-Men ၃ မဟုတ်ပါ Poseidon သည်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသော Poseidon စွန့်စားခန်း၊ မိုင်ယာမီဒုက်ခသည်နှင့် Denzel Washington ရှိရုပ်ရှင်ဘဏ်လုယက်မှု (လှည့်ကွက်) ပါရှိသည်။
မ မည်သူမဆို ဘာကြောင့် Movie Industry ဘာကြောင့်စုပ်နေရတာလဲ။ သူတို့တကယ်တွေးမိသလား။ တကယ်လား King Kong3(အကယ်၍ မင်း Mighty Joe Young ကိုကျော်သွားလျှင်) Miami Vice (sans Don), Poseidon3(အကယ်၍ လွန်ခဲ့သောရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကတီဗီဗားရှင်းကိုရေတွက်လျှင်)၊ X-Men3နှင့်အကြိုမြင်တွေ့သော King Kong XNUMX ကိုကျွန်ုပ်သွားတွေ့စဉ်။ ဘဏ်လုယက်မှုရုပ်ရှင် ????
Movie Industry ၏ပြwithနာမှာယခုအခါ၎င်းသည်တရားဝင်စက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကြောင်အဆီများသောစားပွဲတစ်ဝိုက်တွင်ထိုင်။ ဒေါ်လာဘီလီယံနှင့်ချီပြီးအနိုင်ရမှဖြစ်လိမ့်မည်။
သူတို့ကသမိုင်းကိုမလေ့လာတဲ့သူတွေကထပ်ခါတလဲလဲလုပ်မယ်လို့ပြောကြတယ်။ ငါအမေရိကမှာဘယ်သူမှသမိုင်းမလေ့လာတော့ဘူးလို့စပြီးတွေးလာတယ်။ ဒီတိုင်းပြည်ဟာယုံကြည်ခြင်းနဲ့စွန့်စားမှုအပေါ်မှာတည်ဆောက်ထားတာပါ။ ငါ့ကိုလုပ်ပေးတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုရှာပါ၊ ပြီးတော့သူတို့မှာလုံးဝလုံး ၀ ဖျက်ဆီးခြင်းကနေတစ်လက်မဘယ်လိုကြီးကျယ်တဲ့ပုံပြင်တွေရှိမယ်ဆိုတာအာမခံပါ။
Movie စက်မှုလုပ်ငန်းသည်အမှန်တကယ်ဖြစ်လိုပါက '၎င်း၏အစုစုကိုခွဲရန်' လိုအပ်သည်။ သေချာတာပေါ့… Shrek 5, Rocky 10 စသည်ဖြင့်လွယ်လွယ်ကူကူငွေရှာပါ။ သို့သော် 'start-ups' များကိုပိုမိုရန်ပုံငွေစတင်ပါ။ ကျွန်မရဲ့အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းဇနီးက ၂၀၀၄ ခုနှစ်မှာရုပ်ရှင်တကားထုတ်ခဲ့တယ် Man နာကျင်မှုခံစားရသည် ကြောင်း Bravo လက်ခံရရှိ! တိုရွန်တိုရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွင်ချီးမြှင့်ခြင်းခံရသူ ... အချို့သောအရည်အချင်းများကိုရရှိရန်သူမသည်သူမ၏တံခါးကိုထိုးဖောက်နေသည်ဟုသင်ထင်လိမ့်မည်။
Nope …။ ကျနော်တို့မိုင်ယာမီဒုနှင့် Poseidon တို့လိုအပ်လိုအပ်ပုံပါဘဲ။
Tags: ဖျော်ဖြေရေး / ယဉ်ကျေးမှုရုပ်ရှင်စက်မှုလုပ်ငန်း
မင်း Bailiwick ကဘာလဲ?